Isbarbardhigga Samsung Galaxy S20 FE vs iPhone 12 vs iPhone 12 mini Waa kuwee ikhtiyaarka ugu fiican? | Androidsis
Isbarbardhigga Samsung Galaxy S20 FE vs iPhone 12 vs iPhone 12 mini Waa kuwee ikhtiyaarka ugu fiican?
Bishii Oktoobar 13, Apple ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay noocyada cusub iPhone 12, nooc cusub oo ka duwan sanadihii hore, wuxuu ka kooban yahay 4 terminaal. Bil ka hor, Samsung ayaa soo bandhigtay nooca dhaqaalaha ee Galaxy S20, version in sanadkan la baabtiisay sida Galaxy S20FE (Daabacaadda Fan).
Markii la bilaabay noocyada cusub ee iPhone 12, aragtida ayaa soo jeedinaysa taas waa inaan isbarbar dhignaa nooca cusub ee iPhone 12 Pro iyo Galaxy S20, laakiin ku celcelintu waxay tilmaamaysaa ka soo horjeedka. Sababta: waxay isu jiraan 9 bilood. Waxyaabaha macquulka ah ayaa ah in la isbarbardhigo labadii isweydaarsi ee ugu dambeeyay ee labada shirkadood tan iyo markii labada terminaal ay gaareen suuqa si ay u soo jiitaan isla dadka isticmaala: iPhone 12 iyo Samsung Galaxy S20 FE.
Samsung ma dooneynin inay dib u dhigto daah-furka nooca miisaaniyadda ee Galaxy S20 (sanadkii hore nooca miisaaniyadda ee Galaxy S10 ayaa yimid horaantii Janaayo) si la tartan heerka cusub ee heerka iPhone-ka. Labada terminaalba waxay na siinayaan faa iidooyin ka dhigaya kuwo heer sare ah, in kasta oo qiimahoodu yahay, waxaan u tixgelin karnaa inay yihiin kuwo heer sare ah.
2 Qodobbada wadaaga
5 Xusuusta iyo kaydinta
9 Ikhtiyaar fiican?
Screen 6.5 inji AMOLED 120 Hz 6.1 inch OLED 60 Hz 5.4 inch OLED 60 Hz
Xalinta shaashadda 2.400 × 1080 oo leh 405 dpi 2.532 × 1.170 oo leh 460 dpi 2.340 × 1.080 oo leh 476 dpi
Gacaliye Snapdragon 865 (5G) / Exynos 990 S (4G) A14 Bionic A14 Bionic
Xusuusta RAM 6GB 4GB 4GB
Nidaamka hawlgalka Android 10 Hal UI 2.5 macruufka 14 macruufka 14
Kaydinta 128GB - 256GB (la ballaarin karo ilaa 1TB) 64GB - 128GB - 256GB 64GB - 128GB - 256GB
Kaamirooyinka gadaal 12 MP Ultra Wide - 12 MP Wide - 8 MP Telephoto oo leh 3x Optical Zoom 12 Xildhibaan Ultra Wide - 12 MP Wide - 2x Optical Zoom 12 Xildhibaan Ultra Wide - 12 MP Wide - 2x Optical Zoom
Kaamirada hore 32 MP 12 MP 12 MP
Batariga 4.500 Mah Lama yaqaan Lama yaqaan
Amniga Shaashadda akhristaha shaashadda Aqoonsiga wajiga Aqoonsiga wajiga
Cabbirada 74.5 159.8 8.4 mm 71.5 146.7 7.4 mm 64.2 131.5 7.4 mm
Peso Gram 190 Gram 162 Gram 133
Midabada Cloud Navy - Cloud Lavander - Cloud Mint - Clound Red - Cloud White - Cloud Orange Cadaan - Madow - Buluug - Cagaar - (SOO SAAR) Casaan Cadaan - Madow - Buluug - Cagaar - (SOO SAAR) Casaan
Qiimaha nooca 4G 609 euro - 128 GB / 729 euro - 256 GB Ma jiro nooca 4G Ma jiro nooca 4G
Qiimaha nooca 5G 759 euro - 128 GB / 829 euro - 256 GB 909 euro - 64 GB / 959 euro - 128 GB / 1.079 euro - 256 GB 809 euro - 64 GB / 859 euro - 128 GB / 979 euro - 256 GB
Iibso Galaxy S20 FE 4G oo leh 128 GB / Iibso Galaxy S20 FE 5G oo leh 128 GB
Labada Galaxy S20 FE iyo iPhone 12, isticmaal shaashadda nooca OLEDShaashadaha, marka laga hadlayo iPhone-ka, waxaa soo saaray Samsung laakiin waxaa lagu hagaajiyay Apple, sidaa darteed midabada la soo bandhigay way ku kala duwanaan karaan hal terminal illaa mid kale.
Shaashadda noocan ahi waa xalka ugu fiican markay tahay oo keliya inayan muujinayn midabbo aad u muuqda, laakiin sidoo kale markay timaado yaree isticmaalka batteriga adeegsiga codsiyada ka faa'iideysanaya madow ee codsiyada asal ahaan, wax nasiib darro ku dhicin inta badan barnaamijyada Google, laakiin dhammaan barnaamijyada la jaan qaada ee nidaamka deegaanka ee iOS ee Apple ee bixiya xaalad mugdi ah.
Qodob kale oo labada terminaal ay wadaagaan ayaa ah inay la jaan qaadayaan lacag deg deg ah, taas oo u oggolaanaysa in lagu shubo badh ka mid ah baytariga 3 daqiiqo oo keliya iyadoo la isticmaalayo xeedho 20W ah. Nidaamyada lacag-bixinta degdegga ah, muddada dheer, waxay saameyn ku yeeshaan nolosha batteriga iyagoo si xad dhaaf ah u kululaanaya inta lagu jiro nidaamka lacag-bixinta.
Labada terminaalba waxay leeyihiin a Shaashadda nooca OLED, oo ay soo saartay shirkadda Samsung sidaan ku soo sheegay qaybtii hore, laakiin halkan isku soo beegiddu waxay ku dhammaataa. Halka shaashadda Galaxy S20 FE uu gaarayo 6,5 inji, shaashadda iPhone 12 waa 6,1 inji halka kan iPhone 12 mini-na uu yahay 5,4 inji oo keliya.
Saddexda terminaal wadaag ficil ahaan isla qaraarkii sida cufnaanta pixel ee shaashadda. Haddii aan ka hadlayno Hz shaashadda, el Galaxy S20 Fe waxay na siineysaa shaashad leh heerka cusbooneysiinta ee 120 Hz, halka dhammaan noocyada iPhone 12 (oo ay ku jiraan moodooyinka Pro) ay sii wadaan isticmaalka heerka cusbooneysiinta ee 60 Hz. Dareenkan, sanad kale, Apple wuxuu sii wadaa inuu gadaal ka raago, iyadoo iPad Pro uu yahay aaladda Apple keliya ee bixisa 120 Hz ee shaashadda cusbooneysiinta.
Sidii caadiga ahayd iyo tan iyo markii ay Apple bixisay processor-yada Samsung iyadoo la bilaabay iPhone 3GS, shirkadda saldhigeedu yahay Cupertino waxay fulisaa processor-keedaXaaladdan oo kale, processor-ka A14 Bionic, oo ah processor-ka na siiya awood badan si aan ugu duubno fiidiyowyada 4K HDR ee 60 fps iyadoon qasan.
Arrinta Samsung, shirkadda Kuuriya ayaa dooratay laba processor oo kala duwan iyadoo kuxiran nooca isku xirnaanta. Nooca 5G, waxay dooratay processor-ka Snapdragon 865, oo ah processor kaas oo isku daraya modem 5G ah, halka nooca 4G (Apple uusan ku bilaabin wax nooc ah isku xirnaantan) wuxuu adeegsaday processor Exynos 990 oo ay soosaartay oo loogu talagay shirkad.
Xusuusta iyo kaydinta
Ka hadal xusuusta oo isbarbar dhig waxqabadka u dhexeeya iPhone iyo casriga casriga ah ee 'Android' waxay lamid tahay isbarbardhiga churros iyo merino. Nidaamka hawlgalka ee Apple ee aaladaha mobilada (iOS) uma baahna RAM badan oo hawsha lagu fulinayo, maaddaama processor-ku uu daryeelayo. On Android, waa ka soo horjeedkeeda, inta badan ee RAM, ayaa ka sii fiicnaanaya terminal-ka shaqeyn doona.
Halka iPhone 12 iyo iPhone 12 mini ay weheliyaan 4 GB oo RAM ah, Galaxy S20 FE waxaa maamula 6 GB oo RAM ah. IPhone 12 Pro haddii lagu maamulo isla qadar RAM ah oo ah nooca Samsung, in kuwani ay na soo galaan isbarbardhiga.
Samsung waxay na siisaa laba nooc oo ah kaydinta: 128 iyo 256 GB, booska aan ku balaarin karno ilaa 1 TB adoo isticmaalaya kaararka microSD. Xaaladda iPhone, waxaan ka hadleynaa seddex nooc oo kaydinta ah: 64, 128 iyo 256 GB, meel aan la ballaarin karin sida had iyo jeer looga bartay baaxadda iPhone-ka.
Tusaalaha ah Samsung Waxay na siineysaa 3 kamaradaha dhabarka: Xagal ballaadhan oo ballaadhan, xagal ballaadhan (labadaba leh xallinta 12 MP) iyo telefon 8 MP ah taasi waxay na siineysaa 3x zoom optical ah. Dhiniciisa, iPhone 12 iyo iPhone 12 mini waxay wadaagaan isla nidaamka kamarada oo ka kooban a xagal ballaadhan oo ballaadhan iyo xagal ballaadhan leh 2x zoom optical ah.
Labada terminaalba way sii wanaajiyeen algorithms ka shaqeynaya tallaalka habeenkii, sidaas darteed waa inuusan faraq badan kujirin qabsashadii la sameeyay. Meesha ay iPhone ku guuleysato, qeybta kamaradaha, waxay ku jirtaa fiidiyow, halkaas oo had iyo jeer uu ahaa boqorka suuqa taleefanka, boos ay ku guuleysatay inay ilaaliso inkasta oo lumisay booskii ugu horreeyay ee kamaraddii ugu fiicneyd dhowr sano ka hor.
Aqoonsiga Face-ka waa hagaagsan yahay inta aadan xijaab xidhin. Waqtiyada aan isku aragno, isticmaalka maaskarada ayaa caqabad ku noqotay markaan la macaamilayno taleefanka casriga ah, maadaama uusan ku shaqeyneyn maaskaro, taas oo nagu qasbeysa inaan furno terminal-ka marar badan. nambarka, oo ah lambar qof kasta oo kugu xeerani u badan yahay inuu hore u ogaa.
Xalka ugu raaxada badan iyo sida ugu dhakhsaha badan ee loo furayo taleefanka ayaa soo maray dareeraha farahaHadday ku hoos jirto shaashadda (sida Galaxy S20 FE) ama dhinaca sida jiilka 8aad ee iPad ee Apple soo saartay bil ka hor. Badhan leh dareeraha faraha ee dhinaca, sida Sony Xperia Z5 loo adeegsaday, waxay ikhtiyaar fiican u noqon lahayd xilliyadan iPhone 12 kala duwan.
Haddii aan raadineyno terminal leh waxqabad sare, dan kama lihin nidaamka qalliinka, si cad Galaxy S20 SE waa ikhtiyaarka ugu fiican, sababahan soo socda awgood:
Cabbirka shaashadda ka weyn (waa qayb aad muhiim u ah markaad dooranayso boosteejada)
El meel lagu keydiyo ugu yar (128 GB)
Raaxo in ay shaashadda shaashadda shaashadda (hadda waxaa nalooga baahan yahay inaan xirno maaskaro)
La 120 Hz bandhig
Qiimaha. Halka nooca 5G ee Galaxy S20 FE oo leh 128 GB oo keyd ah ayaa lagu qiimeeyaa 759 euro, iPhone 12 (nooca 6,1-inji ah) oo leh 5G isku xirnaan iyo 128 GB oo keyd ah (oo aanan ballaarin karin) ayaa lagu qiimeeyay 959 euro, 200 euro ka qaalisan.
In kasta oo ay run tahay, maqnaanshaha tijaabooyinka waxqabadka, taasi Processor-ka Apple ee A14 Bionic ayaa aad uga awood badan Snapdragon-ka 865 (processor-ka oo suuqa ku jiray muddo sannad ku dhow) adeegsadayaal aad u tiro yar ayaa si buuxda uga faa'iideysta processor-rada jiilkii ugu dambeeyay.
Haddii aad raadineyso terminaal kaa qaadi doona dhowr sano, waxa macquul waa in la doorto qaab 5G isku xirnaantiisa ah. Laakiin haddii aad ka mid tahay kuwa sida joogtada ah taleefannada u beddela, Xulashada 4G ee Samsung na siiso waxay ku habboon tahay 609 euro, maaddaama ay 100 euro ka jaban tahay qaabka 5G. Markay tahay iibinta sanad gudihiis, la qabsi la'aanta shabakadaha 5G dhib ma noqon doonto maxaa yeelay, inkasta oo ay ka shaqeeyaan hawlwadeennada inay soo jiitaan macaamiil cusub, teknoolojiyadda 5G lagama heli doono waddamada badankood oo leh ballaarin ballaaran illaa 3 ama 4 sano.
Dhinac kale oo xisaabta lagu darsado, iyadoo kuxiran sida aad u aragto, waa in labada iPhone 12 iyo iPhone 12 mini, ha ku darin xeedho iyo headphones, wax haddii aan dooneyno inaan ka helno Galaxy S20 FE. Xaaladda iPhone-ka waa dhibaato ka badan, maaddaama xarigga lagu soo daray uu ka yimid hillaac illaa USB-C, ma haysto USB-A sida xeedho dhaqameedka oo kale, marka waa nalagu qasbi doonaa inaan mid gooni u iibsanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Isbarbardhigga Samsung Galaxy S20 FE vs iPhone 12 vs iPhone 12 mini Waa kuwee ikhtiyaarka ugu fiican?
Samsung Galaxy M31 Prime Edition ayaa ku dhawaaqday batari weyn iyo seddex Amazon Prime oo bilaash ah